Dünyanın en prestijli Motor sporları etkinliklerinden olarak gösterilen The Quail, 17. kez The Peninsula Hotels tarafından gerçekleştirildi. Tüm dünyadan en seçkin ve nadir bulunan koleksiyon parçalarının sergilendiği etkinliğe James Masden, Mark Webber, Hannah Bronfman ve [More ...]
Cuba kwekọrịtara na Russia maka emeghari ohuru nke okporo ụzọ
Deputy Prime Minister Yuriy Borisov, nke Russia kwuputara na ha abanyela aka na ochichi Cuban maka imeghari uzo okporo uzo. Havana na Moscow bịanyere aka na nkwekọrịta banyere emeghari ụgbọ okporo ígwè na Cuba. Deputy Prime Minister nke Russia Yuriy Borisov, Na International Economic Forum na St. Petersburg [More ...]
Ihe Ga - eme Ka Ezigbo Mgbanwe Gbanwee Ọdịdị Pụrụ Ime?
Owuwu nke uzo ozo nke oge a nwere ike ibu ihe magburu onwe ya. Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị banyere usoro ntụgharị nka bụ ngbanwe na mmepe ya mgbe niile ma ruo ugbu a 21. Ncheghari uche na ụfọdụ n'ime ihe ọdịda dị iche iche nke narị afọ. Kedu ihe na-atọ ụtọ [More ...]
Ònye Bombardier Guzobe? Kedu ka o si meziwanye?
Bombardier Inc. bụ otu n'ime ụgbọ oloko kachasị elu n'ụwa, ndị na-emepụta ụgbọelu na nke onwe ha. Joseph Armand Bombardier, bụ onye guzobere ụlọ ọrụ ahụ nke dabeere na Montreal, bụ onye na-arụ ọrụ engine nke mbụ chepụtara ihe ndị mbụ snow. Nwa nwa 1934 nke Bombardier na 2 [More ...]
18 nke Pantone Free Metro Omume
N'afọ a, e mere 18 n'afọ a maka mmemme 'No Pants Subway Ride' na New York, Germany, Berlin, England, London na Netherlands Amsterdam. N'afọ a, ọtụtụ obodo gburugburu ụwa [More ...]
Ndị BTSO nọ na Ebe Ntanetị na Ọdụm Dị Mkpa kachasị mkpa n'ụwa
Bursa Chamber of Commerce and Industry òtù iji ya n'ime akporo NASA si Kennedy Space Base na US nleta niile manned ohere ụgbọ elu bụ otu ọkachamara na aerospace mkpa, ọ gara Embry ilu Aeronautical University. BTSO's Space Aviation na [More ...]
4 mepụtara ma mepụtara site na ndị engineer Turkey na 4 otu ọnwa na nnukwu ụgbọ mmiri R & D na-adọkpụ Ford Otosan na Sancaktepe. 'F-ọhụụ', nke mbụ ụgbọ ala eletrik na-akwọ ụgbọala nke kwụ ọtọ, nwere nnukwu mmetụta n'ụwa nile. 100 Ford Otosan na eletrik na [More ...]
Ụgbọ okporo ígwè na-abịa na US
Ụgbọelu ụgbọ oloko mere na steeti Iowa nke United States. Ogige 38 banye n'ụgbọ okporo ígwè na track. Na steeti United States nke Iowa, ụgbọ okporo ígwè na-ebugharị ka ọ na-agafe agafe mmiri. Ụba nke ájá ụlọ ọrụ na mmanụ soybean [More ...]
New Symbol Symbol Ga-abụ Tramways
N'ihi nsogbu dị arọ na njem ụgbọ njem na New York, nsogbu nke ụgbọ okporo ígwè ga-edozi nsogbu na njem njem ọha na eze. New York City Mayor Bill de Blasio mechara mezuo ihe ọmụmụ afọ abụọ (BQX ụgbọala) [More ...]
Dị ka akụkọ ndị dị na Peru na-ekwu, ndị uweojii nọ nso Machu Picchu ụgbọ okporo ígwè na-ebu ndị njem na-aga n'ihu ụgbọ okporo ígwè ahụ, 23 merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ kwuru. E zigara ndị ọrụ ahụ ike ahụ, nchọpụta banyere mberede ahụ malitere. Inca obodo mmepe na Peru [More ...]
Elon Musk's Ultra Fast Hyperloop Ride Naanị 1 Dollar
Elon Musk, CEO nke Tesla, SpaceX na Boring Company, na-ekwu maka ọrụ ụgbọ njem na-adịghị mma iji kwụsị nsogbu azụmahịa na Los Angeles. Musk, bụ onye kwesịrị aha ya aha ndụ ahụ bụ Iron Man, bụ otu n'ime ọrụ ndị dị ịrịba ama nke afọ ndị na-adịbeghị anya. [More ...]
US na-ebuga ibuga Kazakhstan site na Kazakhstan
Onyeisi nke Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, kwadoro usoro iwu maka US iji rụọ njem njem pụrụ iche na Afghanistan site na ọdụ ụgbọ mmiri Aktau na Kurayk na Osimiri Caspian. Dị ka akwụkwọ akụkọ bụ Kazahstanskaya Pravda si kwuo, President Nazarbayev kwuru, sị, ụgbọ okporo ígwè azụmahịa n'etiti USA na Kazakhstan [More ...]
Ihe omuma ahia nke SANKO Ụmụ akwụkwọ nweta onyinye
Na ROBOGAMES 2018 World Robot Olympics büyük nke a na San Francisco, USA, ụmụ akwụkwọ SANKO na-enweta asọmpi ụwa atọ na ebe atọ n'ụwa. Ụmụ akwụkwọ nke SANKO High School, na otu asọmpi afọ gara aga [More ...]
A na-ebi mbe na echiche nke a n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, nke a ibu elekere n'elu ụlọ ... a na-anabata ọtụtụ puku ndị mmadụ kwa ụbọchị, ezigbo àmà nke ijeoma na nzukọ oge, mara mma n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ... Yaroslavsky Station na Moscow / Russia na Moscow [More ...]
ABB Central Inverter PVS800 Ugbu a na 2 MW Ike
Site na ịmepụta eletrik dị elu PVS800-800B, onye ọhụrụ n'ime usoro PVS57 nke na-aga nke ọma, ABB na-aga n'ihu ịgbasa nnukwu plọp na-agbanwe agbanwe anyanwụ. N'ịgbaso ihe ịga nke ọma nke ABB, usoro PVS800 central inverter, [More ...]
Ejiri ụgbọ okporo ígwè Cerrejon mebiri emebi na Colombia
Ugbua okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Cerrejon na Colombia abiala site na ntiwapụ Cerrejon, Colombia kasị ukwuu na-achụpụ ahịa, mebiri site na ntiwapụ n'ihi mgbawa na njikọ ụgbọ okporo ígwè n'etiti mines na ọdụ ụgbọ mmiri, ma e mechara rụzie. Ụlọ ọrụ ahụ na-ebute ihe mgbawa a [More ...]
Ụgbọ njem Acela Express si na Washington gaa Boston na United States na ọsọ ọsọ karịa 200 kewara abụọ na Maryland. Dị ka ọmụma nwetara, ihe merenụ mere ụnyaahụ ụnyaahụ 06.40 bụ ọrụ ụzụ na ụgbọ okporo ígwè a kpọfere. [More ...]
Ụgbọ njem na USA Na-akụ ụgbọ okporo ígwè 2 Dead 116
Na United States, 2 kwụsịrị n'ihi nkwekọrịta nke ụgbọ okporo ígwè gaa ụgbọ oloko ụgbọ okporo ígwè, ebe ọnụ ọgụgụ nke ndị merụrụ ahụ biliri na 116. Ụgbọ njem Amtrak si New York gaa Miami na ndị njem 147 na South Carolina, USA [More ...]
Onye Senator na-ebu Mberede 1 Nwụrụ Anwụ, 3 Na-akpata Ahụhụ
Egburu 1 na 3 merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ mere n'ihi nkwekọrịta nke ụgbọ okporo ígwè na-eburu ndị Republican na mkpofu mkpofu. Dị ka ọmụma nwetara, ya na ndị nwunye ya si Washington gaa West Virginia, ndị nnọchiteanya Republican nke ụgbọ okporo ígwè na-ebu West [More ...]
5 nwụrụ anwụ na Mexico ụgbọ okporo ígwè derailed
Na Mexico, mgbe ụgbọ okporo ígwè na-adọkpụ, otu n'ime ụgbọ ala ahụ dara n'ụlọ ahụ ma 5 furu efu. Na nkwupụta sitere n'aka Ministry of Transport, Ecatepec, nke dịdewere isi obodo Mexico City, kọrọ na ụgbọ okporo ígwè na-ebu ọka wit, [More ...]